Ny fandikan-teny voalohany amin'ny Galaxy Sport dia mampiseho bezel malama | Androidsis
Andro vitsy lasa izay dia nampahafantarinay anao ny momba ny fivoaran'ny smartwatch vaovao tantanin'i Tizen avy amin'ny orinasa koreana Samsung, smartwatch iray izay dia hamely ny tsena amin'ny anarana Galaxy Sport, ary amin'izao fotoana izao ny anarany dia Pulse. Ity kinova vaovao ity no ho mpandimby ny Samsung Gear Sport ka, toa ity maodely ity, natao ho an'ny atletika indrindra izy io.
Ity terminal vaovao ity dia hotantanan'i Tizen ary ao anatiny ho gestionado amin'ny alàlan'ny fahatsiarovana RAM 4 GB, fahaiza-manao izay tsy isalasalana fa hanampy amin'ny fampivoarana ny rafi-pitantanana. Ity taranaka vaovao amin'ny smartwatch fanatanjahan-tena an'ny Samsung ity dia hanana efijery 1,2-inch, mitovy amin'ny Gear Sport ary mety hiteny mitovy habe aminy ihany koa, na dia tsy ny endrika ivelany aza.
Araka ny fandikana efa navoakan'ity tetikasa vaovao iasan'ny Samsung ity dia hita ao amin'ny bezel ny fahasamihafana lehibe amin'ireo teo alohany. bezel tsy mampiseho indentation, saingy milamina tanteraka izy io. Tsy midika akory izany fa tsy mihodina intsony ny bezel, saingy fahasamihafana lehibe izany raha oharina amin'ireo modely navoakan'ny orinasa hatrizay ary manome sakafo eritreretina izy.
Ity taranaka vaovao ity dia hitantana an'i Tizen miaraka amin'i Bixby sy lHiseho amin'ny smartwatch koa ny fampandrenesana mpanampy, tsy amin'ny finday avo lenta izay mampifandray azy ihany, endri-javatra iray izay tsy misy amin'ny Galaxy Watch androany fa azo tratrarina amin'ny fanavaozana firmware tsotra.
Amin'izao fotoana izao tsy mahalala daty fanombohana eo ho eo izahay, na dia azo inoana aza fa hahita ny hazavan'ny tanan'i Galaxy S10 izy io, kinova izay hamboarina, araka ny ankamaroan'ny tsaho, momba ireo fitaovana telo samihafa handrakofana mpanjifa maro an'isa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny fandikana aloha ny Galaxy Sport dia mampiseho bezela malama